कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् « News of Nepal
कति जिल्लामा उपचार नपाएर, उपचार गर्ने पैसा नभएर, रोग पालेर बस्ने यत्तिकै छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले उपचार गर्दाखेरि लागेको खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जो मान्छे गरिब छ उसलाई छुट दिनुपर्ने होइन र ? यो त उल्टो निर्णय भएन र ? सिभिल, प्रहरी अस्पतालहरुले आर्थिक कमजोर भएकालाई त्यत्तिकै उपचार गर्दैनन् । त्यतिकै उपचार त परको कुरा भयो, एक रुपियाँ पनि छुट दिदैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णय नै गलत छ । निजी क्लिनिक, अस्पतालहरु सेवाभन्दा पनि कमाउ धन्दाको लागि खोलेको हो ?
डाक्टर, नर्सको लापरबाहीले बिरामी मर्छ । आफू राम्रो काम गर्दैनन्, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन्, मान्छे मार्छन् अनि डाक्टर–नर्सलाई कसैले केही भन्यो भने कैद । डाक्टर, नर्सले कसैको ज्यान लियो भने पनि केही नहुने । उसको संरक्षणमा सरकार खडा छ । कसैको लापरबाहीमा कसैको ज्यान जान्छ भने कैद कसले भोग्नुपर्ने हो ? कसैको लापरबाहीमा कसैको अकालमा ज्यान गएको छ, सजाय त डाक्टर–नर्सले भोग्नुपर्ने हो कि मर्नेको आफन्तले भोग्नुपर्ने हो ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ ? अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जे पनि गर्न पाउँछन् । सरकारले डाक्टर, नर्सलाई बिरामी उपचार गर्न लाइसेन्स दिएको हो कि बिरामी मार्न लाइसेन्स दिएको हो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिज्ञले चलाएका छन् । राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर आन्दोलन गरेका छन् । डाक्टर, नर्सलाई कानुनले आन्दोलन गर्ने इजाजत दिएको छ ? स्वास्थ्य व्यापार गर्ने क्षेत्र होइन, सेवा दिने ठाउँ हो । बिरामीको ज्यानसँग किन खेलबाड गर्नु ? डाक्टर, नर्सको लापरबाहीले बिरामीको ज्यान जान्छ भने उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई कैद र जरिबाना तिराउनुपर्छ । केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डाक्टर–नर्सलाई हातपात ग¥यो भने ५–१० वर्ष कैद वा १–३ लाख जरिबाना गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गरियो । यो निर्णयले डाक्टर, नर्सलाई मान्छे मार्न झन् सजिलो भएको छ ।
कोही दुर्घटना हुँदा, कसैको अपरेसनको क्रममा शरीरमा पर्याप्त रगत नहुँदा रगतको अत्यन्त आवश्यक पर्छ । अस्पतालमा रगतसमेत पाइँदैन । जसरी हुन्छ रगत खोजेर ल्याउनुस् भनेर डाक्टर, नर्सले भन्छन् । बिरामीको आफन्त उसै पनि तनावमा हुन्छन् । कहाँ गएर रगत ल्याउने ? भनेको बेला रगत नपाउँदा पनि कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने बारेमा अस्पतालले सोच्दैन ? विभिन्न संघसंस्थाले महिनैपिच्छे जसो रगत संकलन गरिरहेका हुन्छन् त ।
अरुको ज्यान बचाउनको लागि कति दाताहरु महिनैपिच्छे पनि रगत दान गर्न तयार हुन्छन् । धर्म भनेको यसलाई भन्छन् । मानवताको अर्थ यही नै हो । हाम्रो शरीरमा पर्याप्त रगत छ भने त्यो अरुलाई दान गर्दा राज्यलाई पनि निकै सहयोग पुग्छ । रगत बेच्ने वस्तु होइन । तैपनि बिक्री वितरण भइरहेको छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुले रगत नपाएर पनि मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकारले अनुगमन गरेको छ ?
रगत दान गर्नेले गरिरहेका छन् । कसैले बेचेर पैसा कमाइरहेका छन् । जनता रगत नपाएर मरिरहेका छन् । सरकार अझै पनि किन मौन छ ? आवश्यकता पर्दा सित्तैमा रगत पाउने हो भने उसले आफ्नो ज्यान फोगट्मा गुमाउनुपर्दैनथ्यो । भनेको बेलामा रगत पाउन सकेन भने ज्यान जान सक्छ । यता बिरामीलाई गाह्रो भइसकेको हुन्छ उता रगत पाइरहेको हुँदैन । बिरामी मात्र होइन, सुत्केरी हुँदा पनि रगत नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएको हामीले देखेको छौं । रगत अपुग भएको छ भने त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकार सोच्दैन । एकातिर स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले ज्यान गइरहेको छ भने अर्कोतिर रगतको अभावले ।
– सुवास कुमाल, ललितपुर ।